Shiinaha Oo Mareykan Ka Careysiyey Iyo Hanjabaad Katimid Mareykanka. | Baidoa24.com
Home WARARKA MAANTA Shiinaha Oo Mareykan Ka Careysiyey Iyo Hanjabaad Katimid Mareykanka.
Shiinaha Oo Mareykan Ka Careysiyey Iyo Hanjabaad Katimid Mareykanka.
Mareykanka ayaa maanta oo Sabti ah dalka Shiinaha u diray digniin culus oo uu ku sheegay iney joojiso ‘daandaansiga’ ay ka waddo Badda Koonfurta Shiinaha, isaga oo sheegay Shiinaha inuu saliid iyo gaas uu ka baaro badda lagu muransan yahay.
Ila wareedyo dhinaca ammaanka gobolka ka howlgala oo Reuters u warramay waxay Jimcihi sheegeen inuu Shiinaha badda lagu muransan yahay uu u diray markab saliid iyo gaas ka baaro oo ay leedahay shirkadda Petronas tallaabbadaasina ay Mareykanka ka careysiisay.
Markabka Haiyang Dizhi 8 wuxuu horraantii toddobaadkan uu ku sugnaa Vietnam, halkaasi oo markabkaasi kal hore xilligan oo kalana uu saliid ka baarayey.
“Mareykanka oo warbixin qoraal oo uu digniin ugu dirayo Shiinaha soo saaray wuxuu sheegay Shiinaha inuu in mudda ahba waday tallaabbooyin daandaansi ah.”
Shiinaha waa inuu joojiyaaa dabeecadaha noocani ah ee xiisad iyo xasilooni darro ka abuuri karo gobolka” ayuu yiri Mareykanka.
Wuxuna Mreykanka intaa uu ku diray tallaabbooyinka noocani ah iney waxyeelleynayaan ammaanka ayna wiiqayaan suuqa tamarta ee Hindiya ilaa iyo baasafika.”
Horraanti toddobaadkan xilli uu Markabka uu ku sugnaa dalka vietnam, afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha wuxuu sheegay Markabka inuu howlihiisa caadiga ah watay balse madaxda Mareykanka ay eed aan jirin dusha ka saarayaan Beijing.
Previous articleWeriye Cabdicasiis Gurbiye Oo Damaanad Lagu Sii Daayay.
Next articleSacuudiga oo xayiraad ka qaadey Somalia.